Izuva rakadii! | Martech Zone
Chipiri, February 13, 2007 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Pandakafamba ndichienda kumotokari yangu mangwanani ano, ini ndakabva ndarohwa nedutu rakanaka rechando. Fungidzira kunaya, kungoita chando. Ini ndaifanirwa kutyora ganda rechando pamota yangu (Ford 500) ndobva ndadzima angangoita gumi mainji echando akadonha nezuro husiku. Vana vaive kumba - chikoro chakamiswa. Ini ndakariita kuti rishande pasina yakawanda dambudziko (tenda kunaka kwe AWD).
Ndakafamba makwande mabhuroko mana kuti ndishande nemuchando uye ndakanga ndaneta zvakanyanya (hongu, ndinoziva… kuonda!). Kubasa, kurongeka kwakanaka kwemabhegi nemichero kwakamirira vashoma vakashinga vaigadzira. Pafloor ine vamwe vanhu makumi matatu, ndinofunga ndaive mumwe wevatanhatu vakaita kuhofisi. Ini ndinogara Maodzanyemba eIndipolis uye iyo Northside yakarohwa chaizvo zvakashata! Uye manheru ano pane kudzokorora:
Pic kubva Unoshuva TV:
Indianapolis iguta rakanaka kana kuchinaya chando. Izvo zvivakwa uye zvivakwa zvinotaridzika zvisingaite nechando zvakanamatira pavari. Ndinoshuva dai ndaigona kungofamba-famba nekamera nhasi… asi paive nebasa rekuita.
Basa raive dambudziko chairo. Ndakaswera pa Instant Messenger nefoni. Tine timu yakabatanidzwa yehunyanzvi iyo iri kutanga kuvaka kukurumidza pane kuburitswa kukuru kwekutanga kwegore rinouya. Kusina vamwe vanokanganisa mazano uye kutaura pamusoro pazvo zvakanyatsoita kuti zvive zvakaoma kuti zvibudirire, saka ndakazviviga mumagwaro uye ndikamboita prototyping.
Kuchovha kumba kwaive kwakanyarara. Nemigwagwa isina vanhu, ndakafunga kutora mwanakomana wangu, bhiri, kuti uwane ruzivo rwekutyaira muchando. Takawana yakawanda isina chinhu neinopfuura tsoka yechando uye ndakamuita kuti aite madonati, kurasikirwa kwekudzora maitiro, kutsvedza uye nekukurumidza mabhureki… aishamisika nemabatirwo akaitwa mota iyo (sezvandaive ini)… antilock brakes, traction kuzvidzora, uye ese vhiri dhiraivhu anonyatso kupa zvakanyanya kuwanda kutonga. Zvino shamisa. Akadzidzira kweanosvika maminetsi makumi matatu tikazongoenda kuitira kuti mumwe munhu afonere mapurisa uye afunge kuti tiri kukanganisa.
Takamira kudya kwekukurumidza uye ndakasvika kumba ndokutanga kutamba neimwe PHP uye Technorati's API. Mamwe emakodhi sampuli haana kubatwa mumakore panzvimbo yavo saiti (zano, zano). Nekubata kwePH5 kweXML iripo, ndinotarisira kuti mumwe munhu achagadzirisa munguva pfupi iri kutevera. Ini ndakanyora imwe kodhi asi ndakatadza kunyatso kuwana mhinduro kuburikidza nePHP… saka izvozvi ndanetseka uye ndinoidaidza husiku. Ini handitende kuti i API yavo… ndinogona kucheka nekunamatira chikumbiro changu mubrowser pasina nyaya.
Tariro yangu ndeyekuvaka yakanaka widget inopa chimiro cheblog ... chinzvimbo, zvichangoburwa, tag gore, nezvimwewo kuitira kuti zvive nyore kuti uzvitumire pane rako bhurogu kana kutarisa mumwe munhu elses. Ndichasvika ikoko, asi ndiri kuitumidza husiku. Ndine urombo izvi hazvisi zvinonyanya kubatsira posvo! Ndichadzokera munzira munguva pfupi!
Ndiri kuzowana kurara kwekukwira mangwana!
Nei Ndichiita Blog?
Ko dmoz yakafa here?
Feb 14, 2007 at 4:39 PM
Ini ndanga ndichitarisa chaiko rumwe ruzivo nezve trackbacks (ndiyo nzira yandakawana saiti yako) asi ini handigone kuveve, chii chandinoona pano pane graphic! Ini ndakashanda kwete kure neRichmond, saka chando ichi chinoita senge chakandinakira! Wow! 🙂
Feb 14, 2007 at 8:17 PM
Wakawana here zvawaida paTrackbacks Maciek? Ndakaita chinyorwa pano.
Kutenda nekushanya! Tine yakanaka 'inovhuvhuta' dutu rechando nhasi asi rinofanirwa kujekesa masikati ano.
Feb 14, 2007 at 11:05 PM
Huh, hongu ndawana zvandaitsvaga - ndatenda. Unogona here kundiudza nei WP iri nani pane Serendipity? Ini ndichangotanga weblog yangu asi ndichishandisa Serendipity software - unozviziva?
[Ini ndinobva kuPoland, parizvino ndichigara kuGerman - kwandiri idutu iro harisi chinhu chinoshamisa - asi munzvimbo Yako zvakajairika - nakidzwa !!!]
Feb 14, 2007 at 11:36 PM
Kusaziva Serendipity, Ini handidi kukukanganisa kuti usashandise. Ndiri fan weWordPress nekuda kwekugona kuigadzirisa uye kuvapo kwewebhu kwainayo. Ini ndinofunga maficha eblogging software ari kuwedzera kuwanda (pings, trackbacks, kupindura, blogrolls, nezvimwewo), saka kana uchizvifarira - wozozvitsvaga!
Chinyorwa chimwe chandakaverenga chakabata Serendipity mukuremekedza zvakanyanya uye chimiro chakamiswa chakada kufanana neWordPress, saka handina chokwadi chekuti mumwe ari nani kupfuura mumwe.